November 2016 - Page 3 of 24 - Sawirrotv
Wiil Soomaali ah oo Xalay Weerar ku Qaaday Jaamacad ku Taala Gobolka Ohio ee Dalka Maraykanka (VIDEO)
November 29, 2016 – Warbaahinta Dalka Maraykanka ayaa aah u hadal haya wiilkii xalay weerarka ka geystay Jaamacadda gobolka Ohio ee Magaalada Colombus ee dalka Maraykanka, warbaahinta qaar ayaa laga shaaciyay in wiilkani uu Asalkiisa yahay Soomaali, balse haysta dhalashada dalka Mareykanka. Ciidanmada Booliska ayaa sheegay inay toogasho ku dileen wiilkan oo lagu magacaabo C/risaaq …
Somaligii Weeraray Jaamacadda Ohio (VIDEO)
Ciidanmada Booliska ayaa sheegay inay toogasho ku dileen wiilkan oo lagu magacaabo C/risaaq Cali Cartan oo da’diisa lagu sheegay 20-sano jir, kadib markii uu diiday inuu isku dhiibo ciidamada Booliska oo hareereeyay. giisa uu jiirsiiyay, halka qaarna la sheegay inuu ku dhaawacay mindi uu horey u watay. VIDEO – 1 VIDEO – 2 Jaamacadda Ohio …
Tarsan oo ka Hadlay Doorashooyinka Dadban ee Dalka, Kashifayna Arimo Badan oo Qarsoonaa (VIDEO)
November 29, 2016 – Gudoomiyihii Hore ee Gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) ayaa ka hadlay arimo badan oo ku saabsan dalka Soomaaliya, siiba Taariikhdiisa iyo doorashooyinka dadban ee iminka dalka ka socda. Tarsan ayaa kashifay arimo badan oo ka qarsoona dadka shacabka ah, sheegayna inuu iasgu ahaa ninkii ugu horeeyay ee alifay, in Somaliland …
Maamulka Puntland oo Wareegto ka soo Saaray Sababtii ay u Hakiyeen Doorashooyinka Aqalka Heese (Akhriso)
November 28, 2016 – Wareegto maanta ka soo baxay xarunta Madaxtooyada maamulka Puntland oo la soo gaarsiiyay Guddiga Doorashooyinka ayaa waxaa amar lagu siiyay in howlaha doorashooyinka aqalka hoose la hakiyo. Warqadda ayaa waxaa ku saxiixanaa Madaxweyne ku xigeenka Puntland, Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar, waxayna Puntland qoraalkan ku sheegtay in aan wax doorasho ah la qaban …
Maamulka Galmududg oo ka Warbixiyay Dagaalada Dadka Shacabka ah iyo Al Shabaab ku Dhax Maraya Deegaanka Dumaaye (Dhagayso)
November 28, 2016 – Maamulka Galmudug ayaa ka war bixiyay qasaaraha ka dhashay dagaalka u dhaxeeyay dadka Degaanka iyo dagaalyahanada Al-Shabaab ee ku dhexmaraya Degaanka Dumaaye oo ka tirsan Gobolka Mudug. Wasiirka Amniga Maamulka Galmudug Cismaan Ciise Nuur, ayaa maanta Saxaafadda wuxuu ugu sheegay Magaalada Cadaado ee xarunta KMG ah ee maamulka Galmudug in dagaalkaasi …
Masaajido Badan oo ku Yaala Dalka Maraykanka oo Helay Warqado Loogu Cago Juglaynayo (VIDEO)
November 28, 2016 – Ururka ay ku mideysan yihiin Muslimiinta ku nool dalka Mareykanka, ayaa sheegay inay arkeen warqado ay ku qoran yihiin hanjabaad ka dhan ah dadka Muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi. Warqadahan ayaa waxaa lagu hor daadiyay saddex Masaajid oo ku yaal Gobolka California ee dalka Mareykanka, kuwaasi oo dadka muslimiinta ah …
Wal Walka Muslimiinta Dalka Maraykanka (VIDEO)
Warqadahan ayaa waxaa lagu hor daadiyay saddex Masaajid oo ku yaal Gobolka California ee dalka Mareykanka, kuwaasi oo dadka muslimiinta ah ay si aad ah ula fajaceen. Ururka udooda xuquuqda dadka muslimiinta ah ee dalka Marykanka oo la yiraahdo, (CAIR) Golaha xiriirka Muslimiinta Maraykanka, ayaa ku baaqay in boolisku uu baaro waxa uu ay ku …
Al Shabaab oo soo Bandhigay Labo askari Iyo Gaari ay Wateen oo ka soo Goostay Ciidamada Dowladda (SAWIRRO)
November 28, 2016 – Al Shabaab ayaa meel barxad ah ee deegaanka Kuunya-barow ee Gobolka Shabellaha Hoose ku soo bandhigay Gaari ay leeyihiin ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed iyo laba askari oo watay gaarigaasi. Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa fagaare ku yaala deegaankaasi isugu yeeray boqolaal dadweyne ah, kuwaasi oo daawanaayay gaariga laga soo bandhigay iyo labada Askari …
Shir Deg-Deg ah oo Looga Hadlayo Arimaha Doorashooyinka oo Iminka ka Socda Xarunta Xalane (SAWIRRO)
November 28, 2016 – Xarunta Ciidamada Amisom ee Xalane ee gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa iminka ka soconaya kulan looga hadlaayo arimo ku aadan Doorashooyinka Soomaaliya . Kulankaan ayaa wuxuu u dhaxeeya wakiika Qaramada Midoobay ee arimaha dalka Soomaaliya iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka dalka mudane, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Ujeedada ugu weyn ee …
Ciidamada Nisa oo Gacanta ku Dhigay Kaydka Qaraxyada Al Shabaab ee Gobolka Hiiraan
November 28, 2016 – Ciidamada Nabad Suggida qaranka ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen Keyd badan oo waxyaabaha qarxa laga suubiyo, kuwaasi oo Al Shabaab ay ku keydsadeen deegaanka Ceel gaal ee Gobolka Hiiraan. Howlgalkan qorsheysan oo ciidamada NISA, ay ka fuliyeen Deegaankaasi ayaa waxa ay ku ogaadeen kadib maerkii dadka deegaanka …